हात धुनेजस्तो सानोतिनो कुरा | Janakpur Today
हात धुनेजस्तो सानोतिनो कुरा
विश्व हात धुने दिवस पनि मनाइँदैछ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले लामो समयदेखि हात कसरी धुने भन्ने अभियान नै चलाएको सुनिन्छ । यसै गरी रेडक्रसकै जुनियर तथा युवा सर्कलले त यसलाई ठूलै अभियानको रुपमा चलाएको पनि बुझिएको छ । लामो समयदेखि हात धुने तरिका तथा हात धुँदा हुने फाइदाबारे जानकारी गराइरहेको छ । हात धुने काइदा र यसका फाइदाबारे सबैलाई जानकारी हुनु आवश्यक रहेको छ । रेडक्रस संस्थाजस्तो विश्वको प्रतिष्ठित संस्थाले हात धुन किन सिक्नु पर्दछ भनेर सिकाउन खोज्नुका पछाडि धेरै महत्वपूर्ण तर्क वा कारणहरु हुन सक्छन् भन्ने कुरो सर्वसाधारणले बुझ्नु आवश्यक छ । अझ हाम्रो जस्तो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पछाडि परेको समाजको लागि यो निकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । हात धुनु त सानोतिनो कुरो हो । हो, नियमित वा अभ्यस्त भइसकेपछि हात धुनुलाई सानोतिनो कुरो मान्दा पनि हुन्छ तर सानोतिनो कुरोभन्दा पनि यो निकै महत्वपूर्ण छ । वास्तवमा यो सानोतिनो कुरो होइन ।
हात धुने भन्ने कुरो स्वास्थ्य जीवनको मुहान हो । मुहानलाई नै स्वच्छ र सफा बनाउन सक्यौँ भने सङलो पानी खान वा लाउन पाउन सकिन्छ । मुहान नै फोहोर वा अव्यवस्थित भयो भने त्यसले अनेक विकृति ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस कारण हेर्दा हात धुने भन्ने कुरो सामान्य लाग्न सक्छ तर यसको काइदा नजान्दा जीवनमा धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ । सबैभन्दा पहिले त प्रश्न उठ्छ कि हात धुने कतिखेर ? यसको सही उत्तर हुन्छ कि जतिखेर आफूलाई लाग्छ कि मेरो हात फोहोर भयो, त्यत्तिखेर हात धुँदा हुन्छ । हात कतिखेर फोहोर हुन्छ ? यो आफैलाई थाहा हुने कुरो हो । तर के हात फोहोर भएको अनुभूति भएपछि मात्रै हात हुने ? होइन, केही कर्म गरेपछि अनिवार्य हात धुनुपर्छ र केही कर्म गर्नुअघि पनि अनिवार्य पनि हात धुनुपर्छ । उदाहरणको लागि दिसा वा पिसाप गरेपछि हात धुनै पर्छ । यसलाई हाम्रो संस्कृतिले पनि मान्यता दिएको छ । अहिले पनि हामी पाउँछौँ कि जब कोही बोलबम कामरनाथु बनेर कुनै तीर्थ वा धाम जान्छन् तब त्यहाँको नित्यकर्ममा दिसा गरेपछि अनिवार्य स्नान गर्नुपर्ने र पिसाप गरेपछि अनिवार्य साफी गर्नुपर्ने वा हात धुनुपर्ने हुन्छ ।
यस प्रकारको नियमलाई अहिले पनि मठ तथा मन्दिरका साधु वा पुजारीहरुले निष्ठापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । शिक्षित समाजमा पनि यो बानीको रुपमा विकास भइसकेको छ कि जब कोही दिसा गरेर आउँछन् तब अनिवार्य रुपमा साबुन पानीले हात धुने गर्दछन् । पिसाप गरेर आएपछि पनि अनिवार्य रुपले कम्तीमा पानीले भए पनि हात धुन्छन् । यस प्रकारको स्वस्थ बानीको निरन्तर प्रसार भइरहेको छ । यो सुखद कुरो हो र यसको विस्तार हुनु आवश्यक देखिन्छ । दिसा पिसाप गरेपछि हात धुनु जति अनिवार्य छ, खाना खानुअघि पनि हात धुनु त्यत्तिकै जरुरी छ । अरु जे सुकै होओस् तर खाना खानुभन्दा पहिले कुनै पनि हालतमा सफासित हात धोएको हुनै पर्दछ । यसमा कसैले कहीँ पनि कुनै पनि हालतमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन । खाना खानु जति आवश्यक छ त्यो भन्दा पनि आवश्यक हात धुनुलाई लिनु पर्दछ । आफ्नो बानीमा यसलाई यति सख्त बनाउनु आवश्यक छ कि आफूले आफैँलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिनु हुँदैन । अझ आफ्नो घरपरिवारका कुनै पनि सदस्यले खाना खानुअघि हात धोएको वा नधोएको भनी स्पष्ट विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । हात नधोएर कोही खान खोज्छन् भने तत्काल रोक्नु पर्दछ ।
बरु यस्तो बानीको विकास होओस् कि हात नधोई कोही खाना खान खोज्यो भने उसलाई आफैलाई घिन लागोस्, आफैलाई अप्ठ्यारो लागोस् । आफैलाई आफैदेखि लाज लागोस् । अर्थात् खानाभन्दा महत्वपूर्ण हात धुनुलाई बनाउनु पर्दछ, मान्नु पर्दछ । अब प्रश्न उठ्छ हात धुने कसरी ? सही हात धुने तरिका के हो ? वा सही हात धुने काइदा कस्तो हो ? कोरोनाको संक्रमण फैलिन सुरु भएदेखि नै सबै जसो संचार माध्यममा हात धुनको लागि सबैभन्दा राम्रो तरिकाको बारेमा व्यापक सन्देश प्रचार गरिएको छ । अहिले पनि हात धुनको लागि प्रचार भइरहेको छ । पर्याप्त पानी र पर्याप्त साबुनले हात धुनुपर्छ । हात भिजाएपछि पर्याप्त फिँज आउने साबुन वा अन्य साधनले कम्तीमा बीस सेकेन्डसम्म फिजैफिजले खूब मोलीमोली वा रगडेर हत्केलाको प्रत्येक कुना काप्चालाई राम्ररी सफा पार्नु पर्दछ । कम्तीमा बीस सेकेन्ड भनेको कम्तीमा भनिएको हो, तीस सेकेन्डसम्म भए अझ राम्रो । हत्केलाका कुनाकाप्चादेखि नङ र सम्पूर्ण भागमा कम्तीमा बीस सेकेन्ड साबुनको फिज अडिनु पर्दछ र त्यसपछि मात्र सफा पानीले धुनु पर्दछ ।
पानी सफा र शुद्ध छैन भने फेरि अर्को समस्या आउने हुन सक्छ । जुन पानीले हात सफा गरिरहेको छु, त्यो पानी पनि सफा हुनु अनिवार्य छ । वर्तमान अवस्थामा साबुनको साटो माटो, सर्फ, खरानीजस्ता विकल्पको प्रयोग उचित हुँदैन । साबुन नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरो सबैतिरबाट आइरहेको छ । हात धोएको जस्तो गर्ने होइन कि हात राम्ररी धुन पर्दछ । हात धुनमा आफूलाई नै ठग्ने होइन, आफूलाई नै इमानदारीपूर्वक सन्तुष्ट पार्नुपर्दछ । राम्ररी हात नधुँदा के हुन्छ ? यो दुस्साहसी प्रश्न हो । यस किसिमको कल्पना नगरौँ । हात धुनु हुँदैन भन्ने भ्रममा नबसौँ । हात कतिपटक धुने बरु यो प्रश्न आफूलाई गरौँ । कतिपय विज्ञापनहरुमा हरेक बीस मिनेटको अन्तरालमा हात धुँदा पनि हुन्छ भनिएको छ । तर हातलाई नाक वा मुखसम्म पुग्ने बित्तिकै हात धुने अवस्था आएको हो भन्ने बुझौँ । हुन त अहिले घरबाहिर जाँदा मास्क लगाएर जाने प्रचलन शिक्षित समुदायमा बढेको छ । राम्ररी नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउने र सकेसम्म फुल सर्ट अनि खुट्टामा जुत्ता र मोजा छ भने टाउकोमा एउटा टोपी हुँदा आवश्यकताअनुसार हात धुन सकिन्छ । दिसा पिसाब गरेपछि र खाना खानुअघि तथा खाना खाएपछि त अनिवार्य रुपमा हात धुनुपर्छ भन्ने मान्यता त सर्वमान्य भइसकेको छ ।
अरु बेला पनि चिया खानुअघि, फलफूल खानुअघि र अरु केही मुखमा हाल्नुअघि पनि अनिवार्य अनिवार्य रुपमा हात धुने बानी बसालौँ र यो बानी धेरै हदसम्म धेरै जनामा रहेको पनि छ । हात नधुने बानीले धेरै किसिमको रोग लाग्न सक्ने देखिएको छ । कोरोना त अहिले केही महिनादेखि विश्वमा आतंक मच्चाउने महामारीको रुपमा देखिएकै हो । वर्तमान अवस्थामा हात धुनुको विशेष महत्व रहेको छ । कोरोनाको सन्दर्भमा हात धुने कार्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण हुनबाट केही हदसम्म जोगाउने भनिएको छ । हातको माध्यमबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण मुख र नाकसम्म हुन नपाओस् भनेर हात धुनुपर्ने बारम्बार भनिएको पाइएको छ । हात धुन सम्भव नभएको अवस्थामा सेनेटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्छ । सेनेटाइजरको प्रयोगको सन्दर्भमा त धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । विभिन्न कम्पनीका सेनेटाइजर गुणस्तरहीन रहेको भनी सरकारले प्रतिबन्ध लगाउएको पनि समाचारहरुमा जनाएको छ । गुणस्तरहीन सेनेटाइजरले स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने कुरा पनि सुनिन्छ । यस कारण सेनेटाइजरभन्दा बढी मात्रामा सर्वसाधारणलाई साबुन पानीलाई विशेष महत्व दिनु उपयुक्त हुन्छ । साबुन पानीको विकल्प सेनेटाइजर होइन वा हुन सक्दैन । तर जहाँ पानीको उपलब्धता हुन सक्दैन त्यहाँ सेनेटाइजरको उपयोग गर्न सुझाव दिइएको पाइन्छ । वा घरिघरि एक अर्काको हातबाट केही लेनदेन गरिरहनु पर्ने अवस्थामा छिनछिनमा गुणस्तरीय सेनेटाइजरको उपयोग गर्न सकिन्छ । वर्तमान परिवेशमा साबुन पानीले हात धुने कुरालाई सानोतिनो कुरो नठानेर विशेष समयको विशेष महत्वको विशेष कुरो र सधैँ गरिरहनुपर्ने कुरो मान्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
कहिलेकाहीँ सानोतिनो गल्तीले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्ने हुन्छ । हात धुनु पर्ने कामलाई सानोतिनो भनेर वर्तमान परिवेशमा नलिऔँ र यसलाई नहेपौँ । पहिलेदेखि नै रेडक्रसजस्तो संस्थाले यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । अझ विपन्न तथा अशिक्षित समुदायमा हात धुनुपर्ने पक्षलाई निरन्तर विस्तार गर्नुपर्ने छ । यसको चेतनालाई विस्तार गर्नुपर्ने छ । कोरोनाको डरले लकडाउन भएको समयमा धेरै स्थानीय तहले हर घरमा मास्क र सेनेटाइजर पु¥याउने काम गरेका थिए । अझ कतिपयले साबुन पनि घर घरमा वितरण गरेको पाइएको थियो । हो, विपन्न र निरक्षर समुदायमा हात धुने बानीको विकास गर्न र सरसफाइमा पहुँच विस्तार गर्न केही सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यतातिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ तर हातधुने बानीलाई स्वास्थ्य चेतनाको अभिन्न अंगको रुपमा हरेकलाई स्वीकार्य बनाउने गरी आनीबानीको विकास निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । आजको युगमा पनि हात धुन सिक्नु परेको छ वा सिकाउनु परेको छ भन्ने हेयभावले नहेरी हात धुने कार्य निरन्तरको प्रक्रिया हो र यसको बारेमा निरन्तर चेतना आवश्यक छ भन्ने कुराको बोध गराइरहनु पर्छ । हात धुने कुरोको विश्वव्यापी महत्व हुने भएकोले नै विश्वव्यापी हात धुने दिवस मनाउन थालिएको हो ।
अब मात्र एक हजारमा एन्टिजिन टेष्ट हुने
जनकपुर टुडे असोज २८ गत्ते PDF
बुधबार थप ५७४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २६ जनाको मृत्यु
बारामा गोली चल्यो, एक जना घाइते
11 hours पहिले
सर्लाहीमा १५ किलो गाँजासहित २ युवक पक्राउ
कक्षा १२ को परीक्षा आगामी मंसिर ९ गतेदेखि १६ गतेसम्म हुने